Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle enendlela eya ngqo kumathambeka - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle enendlela eya ngqo kumathambeka
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguElodie Et Johan
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uElodie Et Johan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kwindawo yokutyibiliza kwikhephu yosapho emazantsi eentaba.
Isitudiyo esinefenitshala esiyi-25M esibheke kumathambeka iresort,ekwenza uzive uthezava kumgangatho wesine. Yenziwe ngomnyango oneebhedi ezikhweleneyo, igumbi lokuhlala elinesofa nebhedi eyongezelelekileyo, indawo yekhitshi enendawo yokugcina izinto, igumbi lokuhlambela, indlu yangasese eyahlukileyo, isitshixo sokutyibiliza ekhephini, isikhululo soopopayi ngexesha leeholide zesikolo
Iindawo ezininzi onokutyelela kuzo ziquka iChâteau de Montségur, ukunyuka intaba okuphawuliweyo, izinto ezenziwayo ezilungiselelwe yi-resort, ukunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisekile entabeni,
Yiza ubone le flethi okanye indlu ekwicomplex ekwimeko entle kakhulu nenendawo entle kakhulu entabeni kunye namathambeka, uza kukhawuleza ungene kumathambeka, kwiivenkile, kwiivenkile zokutyela, kwibhari, kwisikolo se-ski... iqaqambile, ifakwe ifestile enamaqhwa amabini kunye ne-shutter yombane.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enezinto zonke: i-TV, ifriji enkulu enefriji, i-crockery, iithempleyithi zombane, i-microwave, ioveni, umatshini wekofu we-tassimo, iketile, i-toaster, umatshini we-raclette, i-dropor hood, umatshini wokutshayela, ikhithi yokucoca, umatshini wokomisa iinwele...
Imiqamelo needuveyi ziyafumaneka kodwa azinazinto zebhedi (amashiti, amashiti afakelweyo, imiqamelo, iitawuli, iitawuli zeti) azifumaneki.
4.59 · Izimvo eziyi-96
Uza kuba nazo zonke izinto ezinokusetyenziswa ezantsi kwesakhiwo: iivenkile, ibhari yokutyela, isikolo se-ski, ukufikelela kwithambeka, ukupaka akubhatalelwa...
Ukunyuka intaba, amachibi, ukuloba,
Umbuki zindwendwe ngu- Elodie Et Johan
Ndifumaneka nanini na ngefowuni
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Montferrier